NdFeB na SmCo Igwe Ọdụdọ Jiri na Magnetik mgbapụta
Igwe Ọdụdọ Precast
Office Igwe Ọdụdọ
Plastic ntekwasa Igwe Ọdụdọ
Nrapado Igwe Ọdụdọ
Na-adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ
Nchedo & Mmanụ & Gas
Industrial & akpaaka
Na-eweli & Ijide
&Lọ & Office & Toy
Precast Ihe Formwork
Ebe a na-enyere aka
Akụrụngwa Ahịa Trend
Calculator nke Flux njupụta
Na-adịghị ahụkebe Earth nju ụdịdị
NdFeB siri ike na SmCo nwere ike ịme ihe nwere ike ịchụpụ ụfọdụ ihe na enweghị kọntaktị ọ bụla, yabụ ọtụtụ ngwa na-eji atụmatụ a eme ihe, dị ka njikọ magnetik na nfuli magnetically tinyere ngwa ndị na-enweghị akara. Igwe na-ejikọ magnetik na-enye nnyefe na-enweghị ịkpọtụrụ nke torque. Ojiji nke njikọ magnetik a ga-ewepu mmiri mmiri ma ọ bụ ikuku gas site na usoro ihe. Ọzọkwa, njikọta ndọta bụkwa mmezi na-akwụghị ụgwọ, yabụ na-ebelata ụgwọ.
Kedu ka esi etinye ihe magnet na mgbapụta magnetik na-arụ ọrụ?
Di na nwunye NdFeB ma ọ bụ SmCoa na-etinye ihe ndọta na mgbaaka mgbanaka abụọ n'akụkụ abụọ nke mkpochi mgbochi na ụlọ mgbapụta. A na-etinye mgbanaka mpụta na ọkpụrụkpụ moto; mgbanaka dị n'ime ya na mgbapụta mgbapụta. Otu mgbanaka ọ bụla nwere otu ọnụ ọgụgụ magnet na nke na-emegide ya, edoziri ya na okporo osisi ndị ọzọ na mgbaaka nke ọ bụla. Site na-akwọ ụgbọala na mpụga njikọ ọkara, torque na-ebute site ná magnetically na esịtidem njikọ ọkara. Enwere ike ime nke a site na ikuku ma ọ bụ site na mgbochi mgbochi na-enweghị magnetik, na-ekwe ka iche zuru oke nke nju dị n'ime site na nju. Enweghị akụkụ ọ bụla na-akpọtụrụ na nfuli magnetik nke na-enye ohere maka nnyefe ntụgharị site na nkenke nkuku na ntughari.
Kedu ihe kpatara NdFeB ma ọ bụ SmCo obere ihe magnetị ụwa na-ahọrọ na mgbapụta magnetik?
Ihe ndọta ndị ejiri na ndọta magnet na-abụkarị ihe ndị na-eweta Neodymium na Samarium Cobalt nwere ihe ndị a:
1. NdFeB ma ọ bụ SmCo magnet bụ ụdị magnet na-adịgide adịgide, nke dị mfe iji karịa njupụta elektrọn nke chọrọ ọkọnọ ike mpụga.
2. NdFeB na SmCo ndọta nwere ike iru nnọọ elu ike karịa omenala na-adịgide adịgide nju. Neodymium sintered magnet na-enye ike kachasị ike nke ihe ọ bụla taa. Njupụta ike dị elu na-eme ka ihe dị ntakịrị nke magnet na-ebuwanye ibu iji ruo ogo arụmọrụ nke sistemụ mgbapụta niile na oke nha.
3. Na-adịghị ahụkebe ụwa Cobalt ndọta na Neo ndọta nwere ike na-arụ ọrụ na mma okpomọkụ kwụsie ike. N'ime usoro ọrụ, ebe ọkụ na-arụ ọrụ na-aba ụba ma ọ bụ na-ekpo ọkụ nke eddy na-eme ugbu a, ike ndọta yana mgbatị ahụ ga-ebelata belata site na ọnụọgụ ọkụ dị mma na ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke NdFeB na SmCo sintered magnets. Maka ụfọdụ okpomọkụ dị elu ma ọ bụ mmiri na-emebi emebi, SmCo magnet bụ nhọrọ kachasị mma nke ihe magnet.
Kedu ụdị nke NdFeB ma ọ bụ SmCo magnets eji na magnetik mgbapụta njikọ?
SmCo ma ọ bụ NdFeB nwere ike ịmepụta ihe nwere ike ịmepụta n'ọtụtụ ụdị na ogo. N'ihi na ngwa na magnetik mgbapụta couplings, tumadi magnetik shapes bụmgbochi, achịcha ma ọ bụ aak nke.
Isi emeputa maka adịgide adịgide magnetik njikọ ma ọ bụ magnetically tinyere nfuli na ụwa:
Post oge: Jul-13-2021
128 # Buzheng East Road, Wangchun Industrial Park Mpaghara, Ningbo, China